Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp oo loo ballan qaaday Malaayiin dollar si uu ciyaartooy cusub kooxda ugu soo iibiyo xagaagan – Gool FM
(Liverpool) 24 Feb 2019. Agaasimaha kooxda Liverpool ee waddanka Ingiriiska Billy Horgan ayaa u ballan qaaday tababaraha kooxda Jurgen Klopp in faraha laga saari doono dhaqaale fara badan oo uu ciyaartooy cusub naadiga ugu soo iibiyo xagaagan marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Liverpool waxaa 2018 suuqa kala iibsiga kaga baxay 247 milyan oo giniga istarliinka ah, iyadoo la soo wareegtay Virgil van Dijk, Alisson Becker, Naby Keita, Fabinho iyo Xherdan Shaqiri, inkastoo ay Philippe Coutinho Barcelona kaga iibisay 142 milyan oo gini.
Dhanka ciyaartoyda marka laga soo tago Liverpool waxa ay 200 oo milyan oo Pound ku dayactirtay garoonkeeda Anfield iyadoo welina uu dayactir ku socdo xerada tababarka ee (Kirkby training base).
Liverpool waxa ay doonaysaa in ay malaayiin lacag ah la aaddo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda si ay u noqoto awood muuqata oo Horyaalka Ingiriiska iyo Qaaradda Yurub ah.
Juventus oo guul dirqi ah ka gaartay kooxda Bologna +Sawiro